Wednesday, December 12th, 2018 - 09:56:53
Monday March 20, 2017 - 09:44:32 in Wararka by Muuse Cabdi
Xiriirka kubbadda cagta ee Koofurta Ameerika (Conmebol) ayaa qaatay go’aan xasaasi ah oo ku saabsan hab ciyaareedka tartanka qaramada ee qaaraddaas, iyadoo Copa América iyo koobka kale ee European Championship la ciyaari doono isku mar sanadka 2020-ka ee soo socda.
European Championship ayey tani saameyn ku leedahay.
Brazil 2019 ayaa noqon doona koobka ugu dambeeya ee Copa América oo la qabto sanad ka duwan habkan cusub, waxaana lagu qaban doonaa USA sanadka 2020, xilli Chile ay hanatay Copa América Centenario sanadkii hore. Sanadka 2020-ka waxaa ay noqon doontaa in koobkan iyo European Championship ay isku mar noqdaan, kaasoo isaga qudhiisa is beddel weyn lagu sameeyay, waxaana lagu qaban doonaa 13 magaalo oo 13 dal oo kala geddisan oo Europe ah ku yaalla, halka waagii hore ay aheyd in dal ama 2 dal ay isla marti geliyaan koobka.
Sanadka 2023 Copa América wuxuu ka dhici lahaa Ecuador waana la hakin doonaa, sida la filayo, xilli la jadwaleynayo hab cusub.
US ayaa cadaadis badan saareysaa sidii loogu dooran lahaa martigelinta Copa América.
Marka loo fiiriyo qoraal uu sameeyay Globoesporte, cadaadiska ka imaanaya United States oo doonaya in uu marti geliyo koobkan, markii Arrimo dhaqaale awgeed uu ugu hungoobay munaasabadii 100-aad ee koobkan oo dhacday 2016-kii.
Fifa ayaa sidoo kale sheegeysa in ay kooxaha Europe dani ugu jirto Arrinkan, waxayna ka badbaadi doonaan in ciyaartoydeeda qaaradaha Yurub iyo Koofurta Ameerika ay kala tagaan 2 marxaladood oo kala geddisan, isla markaana waxay mar qura diri doontaa xiddigaheeda koox kasta iyadoo sidoo kale isku mar heli doonta Adeeggooda.